Andro maneran-tany ho an’ny mpanabe : nisy voavaly ao amin’ny PSE ny fitarainana sasany | NewsMada
Andro maneran-tany ho an’ny mpanabe : nisy voavaly ao amin’ny PSE ny fitarainana sasany
Efa nisy tafiditra amin’ny fanavaozana entin’ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana 2017-2021 (PSE) ny vahaolana amin’ny fitarainana napetraky ny mpanabe tao amin’ny kahie voalohany, ny taona 2016, araka ny fanazavan’ny mpandrindra nasionaly ny firaisankinam-pirenena ho an’ny fanabeazana ho an’ny rehetra (Conamept), Rakotoarivony Huguette, omaly teny Antsakaviro. Novolavolain’ny Senkidàn’ny mpanabe eto Madagasikara ny fitarainana nahitana teboka 20 ho fanomezan-danja ny fampianarana eto amintsika. Nivoitra taorian’ny fanadihadiana fa betsaka ny mpampianatra tsy manaja ny ora fampianarana fa tsy tonga matetika any an-dakilasy. Manana asa faharoa ilay mpampianatra satria kely ny karama azony any am-pianarana ka tsy azony hivelomana akory. Vokany, tsy mazoto mianatra koa ny mpianatra ary betsaka ny mandao ny sekoly fa tsy mahatody hatramin’ny fanadinana CEPE.
Efa nojeren’ny fanjakana ny fanatsarana ny karaman’ny mpampianatra amin’ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana, tao anatin’ny telo taona nisesy. Nisy ny fanofanana nomena ny mpanabe indrindra ireo Fram tafiditra ho mpiasam-panjakana.
Anisan’ny olana natsidika ao amin’ny kahie koa ny fahataran’ny fandoavana ny karaman’ny mpampianatra izay misy mahatratra 10 volana izany amin’ny Cisco sasany. Tsy mbola voavaha izany hatramin’izao.
Marihina isaky ny 5 oktobra ny Andro maneran-tany ho an’ny mpanabe. Noho ny toromariky ny fitondrana, ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny hetsika saika hatao. Samy mahatsapa ny rehetra fa nihen-danja ny asa fampianarana ka fotoana hametrahana adihevitra entina mamaerina ny hasin’ny mpanabe ny fankalazana. Ny fahafahana manabe sy mpanabe mahaleo tena ny lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity. Manana mpikambana (ahitana sendikà, ONG, fiarahamonim-pirenena…) 18 ny Conamept izay misandrahaka amin’ny firenena maro.